Maamulka Hirshabeelo oo sheegay inaysan khatar amni jirin kadib markii ay ciidamadu bananeeyeen deegaano dhowr ah. – The Voice of Northeastern Kenya
Maamulka Hirshabeelo oo sheegay inaysan khatar amni jirin kadib markii ay ciidamadu bananeeyeen deegaano dhowr ah.
Star FM March 21, 2019
Madaxtooyada Maamul Goboleedka Hir-Shabelle ayaa faah faahin ka bixisay xaalada guud ee amni deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ka cabanayay mushaar la’aanta ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hir-Shabeelle ahna kusimaha Madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlawe Xuseen ayaa sheegay in goobihii ay ciidamada kasoo baxeen ay weli joogaan ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda, oo horay mushaarkoodii loo siiyey aana qabin cabashada y muujiyeen askarta ka baxay fariisimihii ay ku sugnaayeen.
Waxa uu sheegay in dhamaan deegaanada ay ka baxeen ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin Ciidamo aan Cabasho qabin iyo Maamulada deegaanadaas,isla markaana aysan ka jirin wax khalqal amni ah howlihii maamuladuna ay socdaan.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ayuu sheegay inay siwadajir ah amniga u xaqiijinayaan,isla markaana bulshada iyo maamulka aysan dareemin wax amni darro ah.
Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya ayaa shalay waxaay soo baneeyeen inta badan deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha dhexe,waxayna Ciidamadaasi sheegeen inaysan mudo 4 Bilood ah wax mushaaraad ah qaadan, hayeeshee dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda Tilmaamtay inay dadaal ugu jirto xalinta cabashada ciidamadaasi.
← Wadanka New Zealand oo laga mamnuucay hubka fudud
Gudiga Joogtada ee Golaha shacabka Soomaaliya oo Maanta kulan yeelanaya. →